၁၀:၁၈၊ ၃၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ ရက်နေ့က မူ
၈၉ ဘိုက် ပေါင်းထည့်ခဲ့သည် , ပြီးခဲ့သည့် ၈ လ
ဘော့ - စာသားများကို အလိုအလျောက် အစားထိုးခြင်း (-ဒီ +၎င်း, -ပါထုတ် +ပါ ထုတ်, -ကိုသုံး +ကို သုံး, -မှုတွေ +မှုများ, -ပါ။ + ဖြစ်သည်, -ခဲ့သလို +ခဲ့သကဲ့သို့, -သလိုပဲ +သည်ကဲ့သို့, -ဟာ +မှာ , -လို့ခေါ် +ဟု ခေါ်, -ဖြစ်ရိုက် +ဖြစ် ရိုက်, -ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ +အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်, -ပါဘူး +ချေ, -ပါတယ် +သည်, -တွေနဲ့ +များနှင့်, -ကစတင် +က စတင်, -ရဲ့ +၏, -နဲ့ +နှင့်, -အတွက် +အတွက် , -တဲ့ +သည့်, -သူဟာ +သူသည်)
၀၉:၄၆၊ ၃၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်)
၁၀:၁၈၊ ၃၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်) (နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ရန်)
သူသည် အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ၁၉၄၁ခုနှစ်ကစတင်ပြီး၁၉၄၁ခုနှစ်က စတင်ပြီး သင်္ချာ ပညာရပ်ကို စတင်လေ့လာခဲ့သည်။ သို့သော် သူ့၏ လေ့လာမှုသည် စစ်ပွဲကြောင့် ရပ်ခဲ့ရပြီး ထိုအတောအတွင်း သူသည် စစ်ပွဲတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင် ခဲ့ရသည်။ ၁၉၅၂ခုနှစ်များ အတွင်းမှာသူဟာကွန်ပျူတာတွေနဲ့အတွင်းမှာသူသည်ကွန်ပျူတာများနှင့် လုပ်ကိုင် ခဲ့ရပြီး ဝိန်းပြည်နယ်တက္ကသိုလ်အတွက် ဒီဂျစ်တယ်ကွန်ပျူတာကို ၎င်းဂျစ်တယ်ကွန်ပျူတာကို သူကတီထွင်ပေးကာ ကူညီမှု ပြုခဲ့သည်။ ၁၉၅၆ ခုနှစ်မှာ သူဟာသူသည် ဘဏ်စနစ်အတွက် ပထမဆုံးကွန်ပျူတာကိုသုံးစွဲပြီးတော့ ပထမဆုံးကွန်ပျူတာကို သုံးစွဲပြီးတော့ General Electric တွင် လုပ်ကိုင်ပေးခဲ့သည်။ ၁၉၆၄ ခုနှစ်မှာ မက်ဆာချူးဆက် စက်မှုတက္ကသိုလ် မှာဝင်ရောက်ပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မှာဝင်ရောက်ပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၂ခုနှစ်မှာ သူက ELIZA ဟုခေါ်သော ရိုးရှင်းတဲ့ပရိုဂရမ်ကိုရိုးရှင်းသည့်ပရိုဂရမ်ကို ထုတ်ခဲ့သည်။ ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။၎င်းပရိုဂရမ်မှာ ဒီပရိုဂရမ်ဟာ ယခုသုံးစွဲနေတဲ့ယခုသုံးစွဲနေသည့် chatter bots လို့ခေါ်ဟု တဲ့ပရိုဂရမ်ပါ။ခေါ် သူ့ရဲ့၁၉၇၆သည့်ပရိုဂရမ် ခုနှစ်မှာထုတ်တဲ့ဖြစ်သည် သူ့၏၁၉၇၆ ခုနှစ်မှာထုတ်သည့် Computer Power နဲ့နှင့် Human Reason စာအုပ်ဟာလွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ့စာအုပ်မှာ လွှမ်းမိုးမှုရှိသည့် စာအုပ်တစ်ခု ဖြစ်သည် စာအုပ်တစ်ခုပါ။သူသည်ကွန်ပျူတာတွေကို သူဟာကွန်ပျူတာတွေကိုအရေးပါသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချခိုင်းဖို့ခွင့်မပြုချေ။ အရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချခိုင်းဖို့ခွင့်မပြုပါဘူး။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘာကြောင့်လဲကွန်ပျူတာတွေမှာ ဆိုတော့ ကွန်ပျူတာတွေဟာလူသားတွေမှာရှိသည့်အရည်အသွေးတွေဖြစ်သည့် လူသားတွေမှာရှိတဲ့အရည်အသွေးတွေဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ပညာနှင့် ဉာဏ်ပညာနဲ့ဆက်စပ်တွေးခေါ်ပေါင်းစည်းယူမှုများ ဆက်စပ်တွေးခေါ်ပေါင်းစည်းယူမှုတွေမလုပ်နိုင်သည့် မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက် အတွက်ကြောင့်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်သည်။ Weizanbaum က SLIP ပရိုဂရမ်ဘာသာရပ် ကို ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ဖန်တီးခဲ့သည်။ ၁၉၉၆ မှာ Weizanbaum ကဘာလင်ကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့ပြီး သူ့မိဘတွေ နေခဲ့တဲ့နေရာမှာနေခဲ့သည့်နေရာမှာ ပြန်ပြီးနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြန်ပြီးနေထိုင်ခဲ့သည်။<ref name="lowbio">[http://www.agmb.de/mbi/2003_1/41-43loew.pdf Joseph Weizenbaum&nbsp;–abiography (German)] Wolfgang Löw, Leibniz-Institut für Neurobiologie, Magdeburg, Germany</ref><ref>[http://www.ilmarefilm.org/W_E_2.htm Weizenbaum. Rebel at Work.] Documentary film by Peter Haas and Silvia Holzinger.</ref> Weizanbaum ရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိကို၏အတ္ထုပ္ပတ္တိကို ၂၀ဝ၇ ခုနှစ်မှာ ရုပ်ရှင်အဖြစ်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ရှင်အဖြစ် အဲဒီရိုက်ကူးခဲ့သည်။ အဲ၎င်း ရုပ်ရှင်ကို ဂျာမနီမှာဖြန့်ချိခဲ့သလိုဂျာမနီမှာဖြန့်ချိခဲ့သကဲ့သို့ အင်္ဂလိပ်လိုပါ အင်္ဂလိပ်လိုပါထုတ်ဝေပေးခဲ့ပါတယ်။ထုတ်ဝေပေးခဲ့သည်။<ref name='Information Week'>[http://www.informationweek.com/news/showArticle.jhtml?articleID=206903443 Remembering Joe Weizenbaum, ELIZA Creator - Artificial Intelligence - InformationWeek]</ref> သူဟာသေဆုံးတဲ့အထိဘာလင်မှာရှိတဲ့သူသည်သေဆုံးသည့်အထိဘာလင်မှာရှိသည့် အီလက်ထရောနစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Institute မှာ သိပ္ပံကောင်စီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်သိပ္ပံကောင်စီ၏ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါ တယ်။ Weizanbaum ဟာမှာ MITမှာ လုပ်ကိုင်သလိုပဲလုပ်ကိုင်သည်ကဲ့သို့ ဟားဗတ်၊မှာ စတန်းဖို့လ်နဲ့းဗတ်၊ စတန်းဖို့လ်နှင့် ဘာလင်တက္ကသိုလ်အပြင် အခြား သောတက္ကသိုလ်တွေအတွက်လည်းသောတက္ကသိုလ်တွေအတွက် လည်း ပညာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအတွက် ဝိုင်းဝန်းကူညီလုပ်ကိုင်ပေးခဲ့သည်။ ပညာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီလုပ်ကိုင်ပေးခဲ့ပါတယ်။Weizanbaumမှာ Weizanbaumဟာ ၂၀ဝ၈ ခုနှစ် မတ်လ ၅ ရက်နေ့မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီး ဘာလင်မြို့ရှိ ဂျူးသုသာန်မှာ မြေမြှုပ်ခဲ့ပါတယ်။မြေမြှုပ်ခဲ့သည်။ အများပြည်သူအမှတ်တရနေ့အဖြစ် ဘာလင်မြို့မှာ ၂၀ဝ၈ ခုနှစ် မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့ကို သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။သတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:MobileDiff/627451" မှ ရယူရန်